त्यहाँ आफ्नो साइट क्षेत्रमा सबै भन्दा राम्रो थियो भन्ने सुनिश्चित गर्न खोजे छैन जो एक गर्मी निवासी छैन, र सबै रोपण बढ्न र फल अरूको डाह सहन। तसर्थ, यस विषयमा चाल को स्टोर धेरै प्रकार मा हरेक माली। तिनीहरूलाई को भन्दा बोट पोषण सन्दर्भमा।
आखिर, सबैलाई बाली काट्ने एक बचन भनेर राम्ररी थाह छ। किन बस यो उद्देश्य अवैतनिक माली लागि प्रयोग छैन। एक eggshell जस्तै कसैले, र आलु peelings संग खुसी कसैले। मुख्य कुरा यो सबै हात मा मतलब छ, र त यो जो कुनै पनि माली गर्न लाभदायी छ, धेरै आर्थिक छ।
एक मल रूपमा खमीर
त्यस्तो टमाटर र खुर्सानी रूपमा बाली लागि हो, म आफ्नो गोप्य यस मामला मा पाएका छन्। सबैलाई यी तरकारी बाली एकदम सनकी र capricious, र तिनीहरूलाई उच्च fruiting प्राप्त गर्न दुवै, कडा परिश्रम गर्न आवश्यक थाह छ। तर यो मामला मा माली साधारण रोटी गरेको खमीर आउन मद्दत गर्न। कसले टमाटर को यस्तो लाउने आफ्नो fruiting मा यस्तो हडताली प्रभाव दिन सक्छ भन्ने लाग्यो होला!
यस्तो खमीर रूपमा उत्पादन, सबै द्वारा गरिन्थ्यो। यो पाक रोटी र केक लागि आवश्यक र kvass घर को उत्पादन को लागि छ। हो, र धेरै अन्य व्यञ्जन yeasts प्रयोग भएको छ। बगैचा बिरुवाहरु लागि यति आकर्षक हुन बाहिर गरिएका यस उत्पादन के हो? यो प्रश्नको जवाफ तथ्यलाई मा निहित खमीर Fungi को बायोमास को आधार धनी मात्र होइन प्रोटीन छन्, तर पनि अन्य पोषक एक पाहुना। यी समावेश:
विभिन्न म्याक्रो र सूक्ष्म तत्व;
यी पदार्थ को सबै र वास्तवमा योगदान गर्ने fertilizing कि टमाटर को बिरुवा र खुर्सानी खमीर लागि एक आदर्श विकल्प भएको छ तरकारी बाली।
टमाटर गर्न खमीर खुवाउने को फाइदा के छ
खमीर fertilizing प्राय यो बोट मा प्रभाव सकारात्मक कारक धेरै छ कि कारणले vacationers प्रयोग। तिनीहरूमध्ये निम्न छन्:
बिरुवाहरु मा आफ्नै प्रतिरक्षा वृद्धि प्राकृतिक जीवाणुहरु को स्रोत;
टमाटर को rooting मा एक महत्वपूर्ण वृद्धि;
टमाटर खमीर fertilizing उनको वृद्धि वनस्पति ठूलो accelerates;
बिरुवा को विकास को लागि stimulant;
युवा बिरुवाहरु को धीरज पनि कम प्रकाश अवस्थामा वृद्धि भएको छ।
कारण fertilizing टमाटर को बिरुवा यी कारक खमीर थप र थप प्रत्येक पारित वर्ष लोकप्रिय बन्नेछ।
Fertilizing टमाटर खमीर मात्र सकारात्मक समीक्षा छ। Vacationers भन्दा यसको नुस्खा त सराहना गर्दै: पानी को5लिटर लिएको छ किलोग्राम 'बाँच्न' खमीर। जब मिश्रण किण्व | | खमीर, यो प्रयोगको लागि तयार छ। तर पर्दा परिणामस्वरूप समाधान अघि बढी पानी संग पतला गर्नुपर्छ। अनुपात 1:10 लिइएको छ।
यो राम्रो काम गरे र "रक्सी खींचना" एकदम वृद्धि र टमाटर को विकास दुवै सुधार्न सक्ने। निम्नानुसार यसलाई तयार छ: खमीर को 100 ग्राम र चिनी को आधा कप संग संयुक्त छ पानी तीन लिटर भरिएको। यो समाधान, न्यानो मा एक हप्ताको जिद्दी हुनुपर्छ gauze ढाकिएको।
प्राकृतिक खमीर - एउटै खमीर
RECHARGE खरिद प्राकृतिक sourdough रोटी गरेको खमीर, पकाएको किण्वन विधि सट्टा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस्तो खुवाउने टमाटर खमीर, समीक्षा जो आफु को लागि कुरा, यसको तयारी खरिद खमीर प्रयोग होइन को नुस्खा रूपमा truckers लागि थप स्वीकार्य। प्राकृतिक किण्वन को सम्पूर्ण प्रक्रिया धेरै तेजी बढ्न कि एकल-celled सूक्ष्मजीवहरु बीचमा हुन्छ। यो बोट लागि सबैभन्दा सक्रिय प्रमोटरों छ। यस्तो किण्व | | खमीर hops, गहुँ वा मकै देखि तयार गर्न सकिन्छ।
को hops को खमिर
ताजा एक गिलास (तपाईंले प्रयोग र सुक्खा गर्न सक्नुहुन्छ) ले, शंकु हप र तिनीहरूलाई पानी उम्लिरहेको मा राखे। यसलाई मा स्ट्यु, तिनीहरूले एक घण्टा बारेमा हुनुपर्छ। ठंडा शोरबा सकिन र पीठो को4चमचा र2चमचा चीनी संग संयोजन गर्नुपर्छ। मिश्रण न्यानो ठाउँमा दुई दिनको लागि राखिएको थियो।
यो समय पछि यो एक राम्रो grater2कसा भयो आलु थप्न आवश्यक छ। राम्ररी मिश्रण पछि, मिश्रण आवश्यक न्यानो दिन छोड्न, त्यसपछि खमिर छ प्रयोगको लागि तयार छ। त्यो एक ग्रीनहाउस र खुला क्षेत्रमा खमीर टमाटर fertilizing आयोजित। उत्पादक कुनै उजुरी त सानो fertilizing बिरुवाहरु को एक संशोधित विधि कारण थिएन।
खमीर को रुचाउने कस्तो छ
नयाँ बिरुवा खुवाउने को यो विधि छैन नाम सकिन्छ। वर्षौंसम्म माली आफ्नो क्षेत्रहरू ठूलो सफलता संग अभ्यास। टमाटर र खुर्सानी खमीर को बिरुवा fertilizing कारण यो उत्पादन बोट सबै आन्तरिक स्रोतहरू सक्रिय गर्न सक्षम छ जो विकास एक महान stimulator छ भन्ने तथ्यलाई गर्न यति लोकप्रिय छ। तर यो प्रक्रिया समयमा सबै भन्दा राम्रो प्रभाव दिइएको रुचाउने यस प्रकारको गर्न केही नियम पालन गर्नुपर्छ:
को बिरुवा जमीन रोपिन्छ पछि पहिलो शीर्ष-लाउने एक हप्ता भित्र बाहिर हुनुपर्छ। यो गर्न, हरेक झाडी मुनि तयार मिश्रण को आधा-लीटर जार पोखे।
तिनीहरूले मूल प्रति बोट एक लीटर गर्न मल बढ्छ मात्र रकम लिन पछि बोट खाद दोस्रो समय नै संरचना हुनुपर्छ।
फूल को सुरुमा आयोजित खमीर टमाटर fertilizing लागि अन्तिम सिजन। समाधान नै रहन्छ, तर मात्रा फेरि बढ्छ। अब, प्रति झाडी डेढ लिटर आवश्यक छ।
मल रूपमा खमीर प्रयोग
बिरुवा खमीर, टमाटर, र धेरै अन्य बाली fertilizing, तिनीहरूले मात्र लाभ कुरा गर्दै छन्। के ठीक एक लाभदायक प्रभाव छ?
खमीर लाभदायक जीवाणुहरु स्रोत र बिरुवाहरु को विकास को लागि एक अद्भुत stimulant छ।
यो रुचाउने मूल गठन सक्रिय मार्फत, पानी मा बरामद खमीर कक्षहरू कि पदार्थ, मूल सिस्टम को उपस्थिति लगभग दुई हप्ता छ बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ।
यस्तो एउटा खुवाउने हरियो वजन एकदम वृद्धि भएको छ, र बिरुवाहरु आफूलाई बलियो हुन्छन्।
कि वसन्त एक खमीर रुचाउने थियो बिरुवा, धेरै कम झिकेर र छान्ने राम्रो सहन छ।
उत्कृष्ट सिफारिसहरू एक रूपमा खमीर समाधान को आवेदन द्वारा तयार foliar आवेदन।
के थप उपयुक्त बोट जस्तै fertilizing
कि अवैतनिक माली टमाटर खमीर fertilizing आयोजित बाहेक, त्यो पनि रुचि र बगैचा अन्य बोट। हो, उनको देखि र उथला बिरुवाहरु खुसी हुनेछन्। एक लाउने सबैभन्दा तरकारी बाली को टमाटर, खुर्सानी र खीरे प्रतिक्रिया। म पनि र स्ट्रबेरी यो मन। खमीर रुचाउने को परिणाम, धेरै समीक्षाहरू, धेरै पटक मा तरकारी, फल र बेरी बाली को उत्पादकत्व जुटाउने छ।
टिप्पणी मा माली
खमीर, साथै अन्य लागूपदार्थको प्रभावकारी सूक्ष्मजीवहरु मात्र न्यानोपन सक्रिय छन्। माटो र वातावरण वा कुनै पनि ठंडा हालको सूक्ष्मजीवहरु नष्ट वा अचाक्ली आफ्नो विकास hamper। यस मामला मा, पूर्ण निरन्तर प्रक्रिया को प्रभाव गायब हुन सक्छ।
तपाईं पनि तिनीहरूलाई आधारमा खमीर वा तयार समाधान, छैन बाहिर म्याद सकिने मिति, एक समयावधि समाप्त उत्पादन प्रयोग इच्छित परिणाम ल्याउनेछ रूपमा आयो सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
यो लाउने को दुरुपयोग अस्वीकार्य छ भनेर सम्झना गर्नुपर्छ। सबै ठिक्क राम्रो छ। मौसम समयमा, पर्याप्त तीन feedings। राम्रो शिक्षा stems र फल भयो गर्नको मा, गर्मी मा - ती दुई वनस्पति र ovaries को गठन, र एक को प्रक्रिया बढाउने वसन्त आयोजना गरिन्छ।
खरानी वा चोट eggshells को भूमिमा प्रवेश पछि खमीर उत्पादित टमाटर र खुर्सानी fertilizing। किनभने किण्वन को प्रक्रिया मा, सम्झना गर्न नियम माटो र क्याल्सियम मा पोटासियम को अवशोषण परिष्कृत गरिएको छ।
चिसोका लागि एन्टीबायोटिक्स: नियुक्तिको विस्तार
ट्रान्स-Baikal Cossacks: इतिहास, परम्परा, चलन र दैनिक जीवन
कुन पत्थरहरू क्यान्सर र अन्य उपयोगी सिफारिशहरूको लागि उपयुक्त छन्
सर्कस साराटोभ: इतिहास, पुरानो पोस्टर, टिकट किन्न